Togo - Gpedia, Your Encyclopedia
Republic of Togo (en)
'Dalka jamhuuriyada Togo. Dalka Togo waxa uu kamid yahay wadamada qaarada Afrika gaar ahaan kuwa ku yaala dhinaca galbeed ee kusii jeeda badwaynta Atlantiga. Dalka Togo wadamada xuduudaha la wadaaga waxa kamid ah Benin iyo Ghana, dhinaca koonfureedna waxa kaga taxan bada Atlantiga. Caasamida dalka waxa layidhaa Lome, waxana ay ku talaa xeebta koonfureed. Bedka: Bedka dhulka dalka Togo waxa lagu qiyaasaa 21,924.81, oo (mayl laba jibaaran) una dhiganta 56,785.00, oo (kiiloo mitir laba jibaaran). Baaxada dhulka uu ku fadhiyo dalka Togo waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad bobolka (Virginia) ee dalka Maraykanka.
Dadka ku dhaqan dalka Togo waxa ay kor u dhaafaan 6-milyan oo ruux. Waan tirakoobkii la sameeyay sanadkii 2010-kii. Inkasta oo dalka ay ka jiraan cuduro dilaa ah oo hoos u dhigi kara korodhka dadka reer Togo hadana saadaasha dadka ee sanadka 2050-ka waxa lagu qiyaasay in gaadhi doonto in kabadan 9-milyan oo ruux.
Luuqadaha lagaga hadlo dalka waxa kamid ah Faransiiska, Ewe iyo Mina gaar ahaan labadan luuqadoo ee danbe waxa lagaga hadlaa dhinaca koofureed ee dalka. Waxa kale oo jira luuqadaha Kabye iyo Dagomba oo ay ku hadlaan badiba dadka ku dhaqan dhinaca waqooyi. Aqoonta: Dadka aqoonta leh ee reer Togo waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 51.7% kaid ah tirada guud ee dadka ku dhaqan jamhuuriyada Togo.
Diimaha ay kala haystaan dadka ku dhaqan dalka Togo waxa ugu mugwayn oo shacabka ugu badani ay aaminsanyihiin diimaha kasoo jeeda dhaqnka dadkii hore waxana haysta dad gaadhaya boqolkiiba 59%, diinta Kiristanka, waxa haysta dad lagu qiyaaso boqolkiiba 29%, diinta Islaamkana, waxa aaminsan oo Muslimiin ah boqolkiiba 12%. Cimriga: Celceliska cimriga dadka reer Togo Raggu waxay jiraan 52-sano, dumarkuna waxa ay gaadhaan 56-sano. Dawlada: Qaabka ay ku shaqayso Dawladda dalka Togo waa nidaamka caalamiga ah ee jamhuuga iyo habka xisbiyahda badan (Government Type republic under transition to multiparty democratic rule). Lacagta: Lacagta laga isticmaalo dalka waxa layidhaa Communaute Financiere Africaine franc waxana magaceeda loo qoraa (CFAF). Warshadaha: Warshadaha dalka Togo waxa lagu farsameeyaa alaab ay kamid yihiin Sibidhka, Dunta, Sharaabka iyo waxayaabo lamid ah.
Togo Visa Dalalka
Beeraha dalka waxa kabaxa oo laga beera dalagyo ay kamid yihiin Galayda, Coffeega, Cudbiga, Cassavanaha, Digirta, Bariiska iyo Hadhuudhka. Sidoo kale dadka reer Togo waxa ay aad ula soo baxaan khayraadka badan oo uu ugu horeeyo kaluunku. Dhulka la isticmaalo ee dalka waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 38% kamid ah cabirka guud ee dalka Togo. Khayraadka: Khayraadka dabiiciga ah ee dalka waxa kamid ah macdanaha ay kamid yihiin phosphates, limestone iyo marble.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Togo&oldid=188174"